Indlu kumbindi weVsevolozhsk nazo zonke izibonelelo - I-Airbnb
Indlu kumbindi weVsevolozhsk nazo zonke izibonelelo
Vsevolozhsk, Leningrad Oblast, Russia
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguСергей
Indlu epholileyo, enobubele kwintsapho, indlu yamatye ecocekileyo kunye nokulungiswa okukhulu kumbindi weVsevolozhsk iya kwamkela iindwendwe kunye nabantwana kunye / okanye isilwanyana. Kumgama wokuhamba (imizuzu eyi-10 ukuya kweli-15) kukho indlela yebhayisekile enamachibi amahle kunye neebhulorho, iindawo ezintsha zabantwana kunye nezemidlalo, ipaki yokutyibiliza, isikwere esisembindini esinomthombo kunye nesinema, iivenkile ezinkulu kunye neevenkile ezincinci, imarike, iindawo zokubhaka, kunye indawo yokutyela yaseTokioCity. Kufutshane nohola weNdlela yoBomi, iikhilomitha ezisi-7 ukuya eSt.
Indlu enamagumbi okulala amathathu (alala 7), ikhitshi elikhulu-igumbi lokuhlala, ikhabethe, yonke into oyifunayo yokuhlala - izitya, iketile, i-microwave, ilinen, iitawuli. I-Intanethi-intambo yefiber optic. Akukho bhafu. Kwisiza esisecaleni kwendlu kukho indawo yokuzonwabisa yangaphandle epholileyo - itafile kunye nezitulo, i-barbecue. Ukuba unqwenela, unokubeka i-swing yegadi.
Thina, njengabanini, sihlala nawe kwindlu eyahlukileyo kwisakhiwo esifanayo, ngoko unokuhlala uqhagamshelana nathi kuwo nawuphi na umbuzo, kunye nokuququzelela ukuzonwabisa ngokuhlwa kunye nemidlalo yebhodi okanye iingxoxo ezinomdla, siya kuvuya kuphela!
I-Vsevolozhsk liziko lengingqi yesithili saseVsevolozhsk, idolophu encinci ezolileyo eMntla-ntshona kwiNgingqi yaseLeningrad. Itholakala kwi-Karelian Isthmus, kwiindawo ezintle kakhulu, ezijikelezwe ngamahlathi e-coniferous, amachibi acacileyo, iikhilomitha ezi-7 ukusuka eSt. Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo. Kwisiza kukho iipayini ezinkulu kunye neebhitshi.
Umbuki zindwendwe ngu- Сергей
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$403
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vsevolozhsk